Semalt Expert: Kunyatsoongorora muHackers Toolkit
Pane imwe nguva vatengesi vanodzidza nezve nzira yekunyadzisa sangano, ivo vachaishandisa kuridhika pavariruzivo uye kubudirira kwekare. Nokudaro, kuedza kujekesa chero kudarika kwepadhi kunogona kuratidza kukosha kunokosha sezvo munhu anopinda mupfungwakubva kune anorwisa uye funga nzira dzavanogona kushandisa kuti zvikuvadze.
Frank Abagnale, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt Digital Services, inopa mhando dzakasiyana-siyana dzekurwisana kunowanzoshandiswa nevashambadzi:
Zvinyorwa zvinoratidzirwa zvinoreva kushandiswa kwezvirongwa zvinokuvadza zvakadai semavirusi uye ransomwareiyo inopa vanopikisa masimba ekudzivirira. Kana ikangopinda mukombiyuta, inopesana nekuvimbika kwekombiyuta uye kutora iyomachine in use. Inotarisawo ruzivo rwese ruzivo rwunopinda mukati uye kunze kwegadziriro, pamwe chete nezviito pane zvinyorwa - best vps with ddos protection. Muzhinjimamiriro ezvinhu, zvinoda kuti hacker arambe achishandisa nzira dzavanogona kuwana iyo malware yakaiswa sehukama, uye email isina kunaka inotarisaattachments.
Phishing inowanzoshandiswa apo anorwisa anozvishandura seumwe munhu kanasangano ravanovimba naro kuita chimwe chinhu chavasingadi. Vanowanzoshandisa kushingaira mu email, sechinhu chinonyengera, uye emailattachment. Pakukanganwa chibatanidziro, inoisa malware, iyo inoruramisa mushandisi kune webhusaiti yakatarisa yewebsite, inoenderera mberikukumbira ruzivo rwemunhu kubva kumunhu.
Mutauro wakagadziridzwa Mutauro chirongwa chekudzidzisa, chinobatsira kutauriranane databases. Mavhareji akawanda anochengetedza ruzivo rwevamwe muhuwandu hwavo. Kana pane zvikwangwani mumutsetse wekodhi, mutengesi anogona kuvharaSQL yavo pachavo, inovabvumira musuo wemushure apo vanogona kukumbira zviyeuchidzo kubva kune vashandisi vepasi. Nyaya inova yakaoma zvikurukana iyo nzvimbo inochengetedza ruzivo rwakakosha pamusoro pevashandisi vavo seyakadai semari yechikwereti mumabhuku avo..
Inoshanda nenzira imwechete ye Sject injections, sezvo inokonzera kadhi yakaipa muwebsite. Apo vashanyi vanogona kupinda muwebsite, kemo yacho inozviisa pachedu pakushandura kwevashandisi, nokudaro inogunzva vashanyi zvakananga.Hackers inongowedzera zvinongodzokorora mazwi kana zvinyorwa panzvimbo ino kushandisa XSS. Vashandi vangave vasatomboziva kuti vaseki vakadzvenga zvavoruzivo kusvikira rwakanyanyisa.
5. Kurega Ushumiri (DoS)
Kurwiswa kweDS kunosanganisira kupedzisira kuwandisa webhusaiti nehuwandu hwemotokari kusvika kune imwe nzvimboinokonesa sevha uye isingakwanisi kushandira zvirimo zvayo kune vanhu vanoedza kuiwana. Mhando yemotokari inoshandiswa nevanovhiringidza yakaipazvaireva kupfuudza webhusaiti kuti ivhare kure nevashandisi. Mune imwe nyaya iyo makombiyuta akawanda anoshandiswa kukanganisa, inova Kuparidzirwa KwekupararirayeBasa kurwisa (DDoS), achipa munhu anorwisa IP mazita akasiyana-siyana kuti ashande pamwe chete kubva, uye achiita kuti zvive zvakaoma kuvatsvaga.
6. Session Hijacking uye Man-in-the-Mid Attacks
Kudzoka nekubuda kwekutengesa pakati pekombiyuta uye kureva web server imwe neimwevane chiitiko chakasiyana-siyana ID. Pane imwe nguva mutengesi anowana chidimbu chechirongwa, vanogona kuita zvikumbiro zvichiita semakombiyuta. Inovabvumira kuwanaKupinda kwepamutemo semunhu asingatarisiri kuwana ruzivo pamusoro pezvavanoziva. Mimwe yenzira dzinoshandiswa kuvhara ID dzechikamu dziri kuburikidzacross-site scripting.
Nemhaka yehuwandu hwemawebsite anotoda mapepa, vashandi vanogona kusarudza zvakaremapepaji avo ekupa nzvimbo. Nyanzvi dzekuchengetedza dzinokurudzira vanhu kuti vashandise mapepa epasiki akasiyana. Vatengesi vanogona kuwana mazita evanhu nemaphasiwediuye kushandisa kushandiswa kwechisimba kuwanikwa. Pane kune vatapi venhare vanogona kuti vabatsire nehutano hwakasiyana-siyana hunoshandiswa pane mamwe mawebsite.
Izvi zvinongova zvikamu zvishoma chete zvehutano hunoshandiswa newebsite attackers. Ivo nguva dzoseKuvandudza nzira itsva uye itsva. Zvisinei, kuziva ndeimwe nzira yekudzivirira njodzi yekurwisa nekuvandudza kuchengeteka.